Niile nkọwa ị chọrọ ogo na obodo SEO Marketing | Martech Zone
Anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ na-ekpori ndụ ebe a na Indianapolis ma na-arụ ọrụ na mbọ ahịa ahịa ha na-abata. Imirikiti ahụmịhe anyị nwere ruo ugbu a na-arụ ọrụ na ndị ahịa ụlọ ọrụ ndị na-atụkwa anya ịkwado mpaghara anyị wepụrụ ụfọdụ atụmatụ dị ukwuu maka ha. Ndị ahịa a kapịrị ọnụ anọghị n'obodo ọ bụla, agbanyeghị, ma nwee asọmpi ebe a.
Anyị wepụtara saịtị dị ịtụnanya, wuo nnukwu ọbá akwụkwọ ọdịnaya, mepụta ụfọdụ ọdịnaya adịchaghị elu, kpachara anya na ụfọdụ mmekọrịta ọha na eze na-akpali… na akụkụ niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ha riri elu n'ime ọnwa isii gara aga - enweghị ahịa ahịa ojii, enweghị atụmatụ backlink, ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ọtụtụ nyocha na ọtụtụ ọrụ siri ike. Ọ na-enye aka na ha bụ ndị na-akwụwa aka ọtọ ma na-akwụ ụgwọ n'ahịa juputara na asọmpi ndo.
Nke ahụ kwuru, ka anyị lere asọmpi ha anya, ọ tụrụ anyị n'anya na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na-enweghị ihe dị mkpa nke ezigbo njikarịcha nchọta mpaghara mgbe ọ bịara na saịtị ha na ọnụnọ n'ịntanetị. O siri ike, mana ọ na-eri oge ma chọọ ntọala siri ike weebụsaịtị iji nweta ebe ịkwesịrị ịbụ.
Dịka onye ọ bụla ahịa ahịa dijitalụ ọ bụla nọ ebe ahụ, abụrụla m onye akaebe maka mgbanwe na-adịghị agwụ agwụ na-eme na ihu ala SEO. N'ime edemede a, m ga-ekerịta nghọta m na usoro ole na ole anyị mejuputara iji nyere ndị mmekọ anyị aka inweta ndị ahịa ha ọkwa na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara. Itamar Gero, SEO Reseller
Ihe omuma ihe omuma a sitere na SEO Reseller bu ihe nlere siri ike na m gha akwadoro maka ulo oru obula na acho ime ka uzo ha di. Akpọ, 16 Obodo SEO Fixes iji kwalite ọkwa gị na ụbọchị 20, infographic ahụ na-ejegharị ndị nwe ụlọ ahịa, ndị ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ọbụna ndị na-ahụ maka SEO mpaghara, site na ndozi niile ha chọrọ itinye iji hụ na ndị ahịa ha nọ n'ọkwá ebe ha kwesịrị ịdị, gụnyere:
Ngwa elu saịtị gị.
Kachasị mma maka ekwenti-enyi
Mee ihe Peeji ngwangwa osooso (IGBOB)
Mepụta ọdịnaya na-egbu egbu
Mee ihe akara Schema
Ebuli gị Google My Business ndepụta.
Na-ebuli gị Yahoo! Ndepụta mpaghara site na iji Yext.
Na-ebuli elu ebe Bing gi maka ndepụta ahia.
Na-ebuli ndepụta azụmahịa Yellow Pages gị.
Na-ebuli profaịlụ gị nke Yelp na Manta.
Iji Mpaghara mpaghara Gbaa mbọ hụ na Mgbanwe Ozi Azụmaahịa.
Mee ndị ahịa ka ha nyochaa azụmahịa gị.
Mee ka ụlọ ọrụ ndị dị na mpaghara kwenye.
Banye na soshal midia.
Kachasị iji Facebook were Mkpado OpenGraph.
Kpatụ okporo ụzọ Youtube gị.
Aga m agbakwunye otu nnukwu nke ha chefuru na saịtị a - tinye ederede obodo N’ebe nile. Anyị na-enwekarị aha ụlọ ọrụ ahụ, adres ya, na akara ekwentị ya na ibe ọ bụla nke saịtị ahụ yana mpaghara ha na-arụrụ ọrụ.
Tags: Ndepụta Angiebacklinksamaokwugoogle plusgoogle +njikọ mpagharanjikarịcha mpagharaMpaghara mpagharampaghara ogonchọta mpagharanjikarịcha nchọta mpagharaobodo seompaghara seo fixesnjikarịcha na saịtịNyocha banyere ntanetịoptilocal
Obodo SEO nwere ike melite ogo weebụsaịtị na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara. ọ dị ọtụtụ iche na mkpọsa SEO. Daalụ maka infographic ahụ, ị ​​nyere ezigbo nnọchite anya nke ịchekwa weebụsaịtị maka ndị bi na ya. Nsonaazụ ọchụchọ mpaghara na-agbanwe ngwa ngwa karịa ndị ọzọ ọ bụla ka anyị kwesịrị ị paya ntị karịa na mpaghara SEO